HONOR9Liteကို ဝယ်ယူ- ဈေးနှုန်း/သုံးသပ်ချက် HONOR မြန်မာ
သငျ၏နိုငျငံ သို့မဟုတျ ဒသေကို ရှေးခယျြပါ: လကျရှိဝဘျဆိုကျတှငျ ဆကျနမေညျ အခွားဝကျဆိုကျတဈခုကို ရှေးခယျြမညျ
၀န်ဆောင်မှု စင်တာ တည်နေရာ
သှားရနျ အထောကျအကူ ပငျမစာမကျြနှာ
သင့်နိုင်ငံ သို့မဟုတ် ဒေသအား ရွေးချယ်ပေးပါ
true /content/honor/mm.html Myanmar Burmese
သင့်ကို ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်း ဝဘ်ဆိုက်သို့ ပြန်လည် လမ်းညွှန်ပေးပါမည်။ 0S
MM ကုန်ပစ္စည်း Smartphone HONOR9Lite
မျက်စိနှစ်လုံးဖြင့်ကမ္ဘာကိုကြည့်လျှင်ပို၍ကြည်လင်သောမြင်ကွင်းကိုတွေ့နိုင်ပါသည်။dual-camera နှင့်နည်းပညာဦးဆောင်သူအဖြစ် ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တီထွင်ဖန်တီးသော model အသစ်မှာလည်း ရှေ့နောက် Dual-camera ဖြစ်အသုံးပြုထားပါသည်။ ပြီးတော့Full View Display *FHD+screen ပါရှိပြီး ရိုက်ထားသော ဓာတ်ပုံမြင်းကွင်းများကိုကြည်လင်းအောင်ကြည့်ရူနိုင်ပါသည်။
*Full View Display ဖြစ်ပြီး ယေဘုယျအားဖြင့် ကျဉ်းမြောင်းသောဘေးဘောင်နှင့်ကျယ်ပြန့်သောမျက်နှာပြင် အချိုးတူညီသော စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပါသည်။
Dual-lens front Camera နှင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးလျှင် ကိုယ်မှာရှိသောပင်ကိုအလှတရားများပေါ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
"Honor9Lite ၏​ အ​ရှေ့နှင့် အ​နောက်တွင်​​ထိပ်​တန်းစာရင်းဝင်​ 13MP + 2MP Dual lens HD Camera ပါရှိသည့်​အပြင်​ အဆင့်​မြင့်​တင်​ထား​သော Hardware ​ထောက်​ပံ့စနစ်​များ၊ Professional Portrait Mode နှင့်​ များပြားလှတဲ့ shooting mode များပါဝင်​အားဖြည့်​ထားလို့​ သင်​ဘယ်​​နေရာ​​ ဘယ်​အချိန်​တွင်​မဆို သင့့်​၏ရိုက်​ချက်​တိုင်းကိုအသက်​ကြွဆုံးပုံရိပ်​​ဖြင့်​ အားလုံးထက်​သင်​ဟာအလှပဆုံးဖြစ်​​နေမှာပါ"
13MP+2MP Front Camera
Hardware-level Bokeh Effects
Upgrade Beauty တွက်နည်းရဲ့အကူအညီကြောင်း selfie ဆွဲတာပို၍ လှပပြီ သဘာဝကျတယ်၊honor 9lite ဟာ မျက်နှာပြင်၏ကောက်ကြောင်းနှင့်အင်္ဂါရပ်ကိုဖတ်၍ ပြီးနောက် gender ခွဲပြီသက်ရောက်သော လှပကိုပြင်ပေးပါသည်။
Gender Beauty Mode
Real Dual Camera ကိုအသုံးပြုလျှင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရုပ်ထွက်များကို ရရှိနိုင်မှာဖြပါသည်။
Real Dual camera 13MP+2MP နှင့် PDAF Fast Focus စနစ်ဖြင့် သင့်ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန်တွင် ပိုမိုကောင်းသော သဘာဝကျသောဓာတ်ပုံကိုလွယ်ကူစွာရိုက်ထွက်နိုင်ပါသည်။ထို့အပြင် ဓာတ်ပုံကိုရိုက်ကူးချိန်တွင်အဓိက၀တ္ထုကိုအထူးရိုက်နိုင်အောင် အဆင့်မြင်Broad circle mode ဖြင့်တပ်ဆင်ထားသည်။honor 9lite ကသင့်၏ life time ဓာတ်ပုံများက်ိုပိုမိုတိကျနဲ့အနုပညာဖြစ်သော ဓာတ်ပုံများကိုဖမ်းယူရိုက်ကူးပေးထားသည်။
13MP +2MP Rear Camera
PDAF Fast Focus
ပို၍ကျဉ်းမြောင်းသော ဘေးဘောင့်ကိုတီထွင်ပြီ။Resolution 2160*1080FHD,Color ပိုပြီကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖြစ်တယ်,Videoကပိုပြီကြည်လင်ပါတယ်.18:9 Full View Display,တစ်ဦးထ က်ပို၍ကျယ်ပြန်သောမြင်ကွင်းနှင့်ဂိမ်းကောင်းကောင်းကစားသောခံစားချက်ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
ပါးလွှာပြီး ကြည်လင်းတောက်ပသော 2.5D အရှေ့အနောက်ဖန်သားမျက်နှာပြင်ပုံစံ။နောက်ကျောဘက်တွင် 12ထပ် nano နည်းပညာဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ပို၍တောက်ပသောဖန်သားမျက်နှာပြင်လက္ခဏာများဖြင့် ငယ်ရွယ်တက်ကြွမူကိုပေါ်လွင်စေသည်။အထူးအားဖြင့် ပါးလွှာသော ဒီဇိုင်းတီထွင်ထားခြင်း PPVD လေဆာထွင်းထုနည်းပညာနှင့်အလင်းလှိုင်း ယိမ်းယိုင်ပြီး မတူညီသောခံစားမူကိုရရှိနိုင်ပါသည်။
*ဖန်သား အရောင်ဟာ အပြာနှင့်မီးခိုးရောင် နှစ်မျိုးဖြစ်ပေါ်လွင်နိုင်သည်။
EMUI 8.0 - Sleek,
ပိုပြီ smartဖြစ်သော ပိုပြီမြန်သော အတွေ့အကြုံကိုရရှိချင်ပါသလား? EMUI 8.0 နောက်ဆုံးပေါ် AI နည်းပညာကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။နောက်ထပ် F2FS File System ကိုလည်းတို့မြှင်းထားတယ်။System optimization နှင့် ပို၍ထိရောက်သော Defragmentation ပါဝင်ပါသည်။ပြီးတော့ သင့်၏software များသောကြောင့် handset တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောင်တာကို စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။
Honor 9lite နောက်ဆုံးပေါ် Kirin 659 Chipset ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ အခြေခံ 16nm process ကိုနည်းပညာ။CPU Octa core 2.36GHz,Ram 3GB,APP Twin and Game Run Smoother.
Function သစ်လက်ဗွေသော့ဖွင့်စနစ် 4.0 က လက်ဗွေဖွင့်ချင်ဟာ 0.25 second အမြန်ဖြင့်ဖွင့်နိုင်ပါသည်။နောက်ထပ် လက်ဗွေရာနှင့်အတူ ကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းစနစ်ပါဝင်ပါသည် သုံးတာပိုများလျှင် ဖွင့်တာပိုမြန်လိမ်မည်။ Security Chipset နှင့် လက်ဗွေအချက်အလက်များကို သီးသန့်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဟက်ကာများ၏ရန်နှင့် ကင်းဝေးအောင် တာဆီးထိန်းသိမ်းပေးထားသည်။
*Honor ရုံးတွင်း ဓာတ်ခွဲခန်းများမှ ရရှိထားသည့် သဘောတရားအရ တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုများဖြစ်ပါသည်။ ဒေတာအစစ်အမှန်သည် သီးခြားထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ ဗားရှင်းများ၊ အပလီကေးရှင်း အခြေအနေများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေ ကွာခြားချက်များအရ ကွဲပြားနိုင်ပါသည်။ ဒေတာအားလုံးသည် အမှန်တကယ်သုံးစွဲမှုအပေါ် မူတည်ပါသည်။
3000mAh ဘက်ထရီ အား ၊ honor 9lite သည် 5.0 Smart Battery အားချွေတာသောနည်းပညာဖြင့်အသုံးပြုထားသည်။ဖုန်းအမြဲသုံးဆွဲသော customer များအတွက်လည်း တစ်ရက်သာလုံး သက်တောက်သက်သာစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ six Power နည်းပညာဖြင့် သင့်အတွက် သီးချင်း86နာရီ သို့မဟုတ် ရုပ်ရှင်13နာရီအတွက် စိတ်ပူစရာမလိုပါ။
*3000mAh is typical value
Huawei ရဲ့နှစ်၃၀ ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာနှစ်၃၀အတွေ့အကြုံ ,ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ထားသော honor 9lite ကို လှိုင်းဆွဲအားနည်းသောနေရာ များတွင် ဥပမာ-ထာဝါတိုင်းနှင့်အလှမ်းဝေးသော တောင်တန်းဒေသနှင့်တိုက်အမြင့်ထူးထပ်သောနေရာ များတွေလည်း လှိုင်းဆွဲအားများကို ပိုမိုကောင်းမွန်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးထားသည်။
Where To Buy IMEI စစ်​​ဆေးရန်​ GPU Turbo သတင်းများ သီးသန့်ဓာတ်ပုံ
HONOR 9X HONOR 20 Lite HONOR 8S HONOR 8A HONOR 8C HONOR 8X
တည်နေရာပြ မြေပုံ အသုံးပြုခြင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ကိုယ်ရေးမူဝါဒ ကှတျကီး